I-Google Pixel ithengise ngaphezulu kwiveki yokuqala kune-Nexus 6P | Iindaba zeGajethi
Omkhulu uG uchitha kakhulu isixa esikhulu semali kwiintengiso zeTV Kwaye baninzi abasebenzisi abaxela kwelinye icala lamachibi njengakwimidlalo, kwezo ndawo zentengiso, bavela ngokulandelelana bethengisa iPixel bebonisa indlela esijongane ngayo neyona Android ibalaseleyo yomzuzu (lo ngumfanekiso awuthathayo). Ayigcinanga kumzamo kaGoogle wokuyithengisa, kodwa kunye nabaqhubi abanayo kwindawo yabo yokugcina izinto.
Ngoku sinedatha ekhomba kwifayile ye- Umthamo wentengiso yePixel ngokuthelekiswa neNexus 6P, enye yeefowuni ezithandwa kakhulu ngabaninzi. Idatha ivela kuAppboy, enoxanduva lokuhlalutya ngaphezulu kwe-100 yezigidi zezixhobo mihla le. Uhlalutyo lutyhila ukuba iPixel ifike kwi-0,016% yesabelo sentengiso kunye nePixel XL 0,020% ngeveki emva kokumiliselwa; I-Nexus 6P ifuna ngaphezulu kwe-2 ukufikelela kwinqanaba elifanayo.
Kwaye kwakhona uAppboy uqinisekisa ukuba ukukhula bekuya kuba kukhulu ukuba isitokhwe sePixel ngekhe inqunyelwe nguGoogle kunye neVerizon. Ngokonyuka okukhulu kwenqanaba lokwamkelwa eliqhele ukuba lusuku nje emva kokumiliselwa, iPixel XL yabona esezantsi kunokuba bekulindelwe. Kodwa oku kungenxa yokuba iimodeli ze-XL zathengiswa kuqala kwiVenkile kaGoogle kunye naseVerizon.
Endaweni yoko, yafunyanwa Incopho emangalisayo eyenzeka ngo-Okthobha u-25, kanye njengokuba izixhobo ezininzi ezigciniweyo ziqala ukuthunyelwa kubathengi. Lilonke, ivolumu ikhule nge-274% yePixel kunye ne-158% yeXL kwiveki emva kokumiliselwa.
Ukuba sithelekisa la manani nalawo aqhelekileyo afunyanwa yi-Samsung, isixhobo sokuqala esenziwe nguGoogle siye sanaso izinga lokukhula eliphezulu ngalo mzuzu. I-Galaxy S6 kunye ne-S7 yabona kuphela ukonyuka kwe-104% kunye ne-171% ngexesha elifanayo kwiveki enye. Ngelixa ezi datha zibambe ngamehlo, ukwamkelwa komntwana kuthathwa xa kuthelekiswa nalabo bavelisi basekwayo, okunengqiqo kwelinye icala. Zombini iiflegi zeSamsung zafikelela kwimarike ephezulu kusuku lokuqala kunePixel kunye nePixel XL eyenziwe ngeveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Google Pixel ithengise ngaphandle i-Nexus 6P kwiveki yokuqala